Sable ဂျာမန်သိုးထိန်း - Ultimate မွေးမြူရေးလမ်းညွှန် - Breeds
Sable ဂျာမန်သိုးထိန်း - Ultimate မွေးမြူရေးလမ်းညွှန်
အစစ်အမှန်ဂန္ထဝင်ဖြစ်သော Sable ရောင်ဂျာမန်သိုးထိန်းသည်သိုးထိန်းအားလုံး၏အထင်ရှားဆုံးသောအင်္ကျီအရောင်ဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းတို့ကိုအဘယ်အရာကအထူးထူးခြားစေသနည်း။
ကောင်းပြီ, Sable ဂျာမန်သိုးထိန်းခွေးရဲ့တည်ထောင်သူအဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ရဲ့ခိုင်မာတဲ့သဘောတရားကိုက်ညီသောတစ်ခုတည်းသောအရောင်ဖြစ်ပါတယ် စစ်မှန်တဲ့သိုးထိန်းခွေး၏ ။
ဤခွေးတစ်ကောင်သည်တက်ကြွသောလူပုဂ္ဂိုလ်များ၊ စုံတွဲများသို့မဟုတ်မိသားစုများနှင့်ကိုက်ညီသောကြီးမားသောဥာဏ်ရည်ရှိသူ၊ သစ္စာစောင့်သိပြီးချစ်ခင်သောခွေးတစ်ကောင်ဖြစ်သည်။
ဤသည်အသိဉာဏ်နှင့်သစ္စာစောင့်သိဖောက်မက်ဗွန် Stephanitz မှအသိအမှတ်ပြုနိုင်ပါသည်။
၁၈၉၉ တွင် Von Stephanitz သည် Hektor အမည်ရှိခွေးတစ်ကောင်နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ သူသည်သူ၏နာမည်ကို Horand von Grafrath သို့ပြောင်းလိုက်သည်။
Von Stephanitz သည်ဂျာမန်သိုးထိန်းခွေးအစည်းအရုံးကိုတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမကြာမီတွင်မွေးမြူရေးအစီအစဉ်ကိုစတင်ခဲ့သည်။
Von Stephanitz နှင့်သူ၏ခွေးများကအကောင်းဆုံးခွေးများကိုသာဂရုတစိုက်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ Hektor သည်စုစုပေါင်းခွေး ၈၄ ကောင်ရှိသည်။
ဒီဖောက်တရားဝင်အမေရိကန် Kennel ကလပ်အားဖြင့်အသိအမှတ်ပြုသောအခါ, 1908 ခုနှစ်တွင်ဒါဟာဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုအကြာသည်အထိမဟုတ်ခဲ့ပေ။
ခွေးအဘို့အအမေရိကတိုက်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာ မျိုးပွားမှုဖြစ်သော Rin Tin Tin ကဲ့သို့သောရုပ်ရှင်ကြယ်များအတွက်အသိအမှတ်ပြုခံရနိုင်သည်။
Will Smith နှင့်“ I am Legend” ၌ပါသောအရာကိုသင်တွေ့ဖူးပေမည်။
ယနေ့ဂျာမန်သိုးထိန်းသည် ဒုတိယလူကြိုက်အများဆုံးခွေးဖောက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌တည်၏။
အဆိုပါ Sable ဂျာမန်သိုးထိန်းတစ် ဦး အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့စိတ်ထားရှိပါတယ်။
Sable German Shepherd ကိုမူလခွေးအဖြစ်လူသိများသည် သူတို့ရဲ့ဝံပုလွေဘိုးဘေးတို့ ။
ဒါဟာ Von Stephanitz ရဲ့အတွေးအခေါ်ကနေလမ်းလွဲမပြုခဲ့သောတစ်ခုတည်းသောကုတ်အင်္ကျီအရောင်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ Sable ကုတ်အင်္ကျီတစ် ဦး ကြီးစိုးဗီဇဖြစ်ပါတယ် နှင့်ဂျာမန်သိုးထိန်းမျိုးစိတ်များ၏ပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။
ဤခွေးတစ်ကောင်၏အသွင်အပြင်သည်လှပသည်၊ သို့သော်သိုးထိန်း၏ကွဲပြားခြားနားသောကုတ်အင်္ကျီအရောင်သည်စိတ်ထား၊ ကျန်းမာရေးနှင့်အပြုအမူအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပါ။
ဒီနေ့ ဂျာမန်သိုးထိန်းအရောင်များကိုကြီးထွားစေသည် အဖြူရောင်မှအနက်ရောင်အထိ၊ နောက်ဆုံးမူရင်း။
အရွယ်အစား အမျိုးသမီးများအတွက် ၂၂ မှ ၂၄ လက်မနှင့်ယောက်ျားများအတွက် ၂၄ မှ ၂၆ လက်မ
အလေးချိန် အမျိုးသမီးများအတွက် 55 မှ 73lb နှင့်အထီးများအတွက် 75 မှ 95lb
သက်တမ်း9- 13 နှစ်
အသင့်တော်ဆုံး တက်ကြွသောပုဂ္ဂိုလ်များ၊ စုံတွဲများနှင့်မိသားစုများ
အရောင် Sable၊ Tan၊ ရွှေ၊ အနက်ရောင်၊ အဖြူရောင်၊ အသည်း၊
အပူချိန် Self- စိတ်ချရသော, မတ်ေတာ, သစ္စာစောင့်သိ, အကာအကွယ်နှင့်အသိဉာဏ်
အခြား Alsatian, Berger Allemand နှင့် German Shepherd Dog
ဤခွေးပေါက်စများသည်လျင်မြန်စွာကြီးထွားပြီး ၁၈ လမှ ၂၄ လအထိသူတို့၏ရင့်ကျက်မှုသို့ရောက်သည်။
သူတို့ကလေ့ရှိပါတယ် သူတို့ရဲ့ ဦး ခေါင်းနှင့်ခြေနှစ်ခုလုံးသို့ကြီးထွားရန် ။
ပျမ်းမျှအားဖြင့်အမှိုက်သရိုက်များ၏အရွယ်အစားသည်ခွေးပေါက်စ ၈ ကောင်ခန့်ရှိပြီး ၅ မှ ၉ အထိဖြစ်နိုင်သည်။
အကောင်းဆုံး Sable German Shepherd ခွေးပေါက်စများသည်များသောအားဖြင့်ဒေါ်လာ ၈၀၀ မှဒေါ်လာ ၁၅၀၀ ကြားတွင်ရှိသည် ။ ၎င်းသည်သွေးကြော၊ pedigree နှင့်မျိုးပွားသူတို့အပေါ်မူတည်သည်။
သင်၏မွေးမြူသူကိုသိရန်အရေးကြီးသည်။ အတွေ့အကြုံရှိပြီးအသိအမှတ်ပြုမျိုးပွားသူသည်ပိုင်ရှင်အသစ်များကိုတင်ပါးဆုံရိုးရမှတ်များနှင့်မိဘသမိုင်း (ဆိုလိုသည်ကားမျိုးရိုး) ကိုပေးလိမ့်မည်။
သင်နှစ် ဦး စလုံးမိဘများ (သို့သော်နိမ့်ဆုံးအနေဖြင့်ဆည်) နှင့်တွေ့ဆုံခြင်းအားဖြင့်သင့်ခွေးကလေးရဲ့စိတ်ထားကိုကောင်းကောင်းသိသင့်တယ်။
ဤခွေးတစ်ကောင်သည်စစ်တပ်နှင့်ရဲများနှင့်အဆက်အသွယ်ရှိသောခွေးအဖြစ် ဆက်လက်၍ မွေးမြူလျက်ရှိသည်။
သူတို့၏စိတ်နေသဘောထားသည်စိတ်ရှည်သည် ဖြစ်၍ သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ပိုင်ရှင်ကိုကောင်းစွာစိတ်ချရသောကြောင့်ခွေးများကိုကောင်းမွန်သောခွေးများဖြစ်စေသည်။
သူတို့ရဲ့လုယက်မှု drive ကိုလျှင်, သို့သော်အတော်လေးမြင့်မားသည် စနစ်တကျနှင့်အစောပိုင်းအသက်အရွယ်ကနေလူမှုရေး ထို့နောက်မည်သည့်လုယက်မှု drive ကိုပြissuesနာများကိုဖယ်ရှားပစ်အတွက်မည်သည့်ပြproblemsနာများရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
သူတို့ဟာအလွန်ကောင်းတဲ့အစောင့်ခွေးတွေကိုလုပ်နိုင်တယ်၊ သူတို့ရဲ့ပိုင်ရှင်တွေကိုကာကွယ်ပေးတယ်။ ၎င်းသည်သူတို့၏လေ့ကျင့်နိုင်စွမ်းမြင့်မားမှုနှင့်ပေါင်းစပ်လိုက်ခြင်းသည်၎င်းတို့အားစစ်တပ်နှင့်ရဲတပ်ဖွဲ့အတွင်းရှိအလုပ်များအတွက်အလွန်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းစေသည်။
Sable German Shepherd သည်အသိဉာဏ်ရှိသောခွေးတစ်ကောင်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ခြိမ်းခြောက်ခြင်းနှင့်ခြိမ်းခြောက်ခြင်းမရှိသောအခြေအနေများကိုခွဲခြားသိမြင်နိုင်သည်။
သို့သော်ဆင်တူသည် ရုရှားဝက်ဝံခွေး သူတို့ဟာသူစိမ်းတွေကိုသတိထားရမယ်၊
အဆိုပါ Sable ဂျာမန်သိုးထိန်းအလုပ်လုပ်ဘို့ကြီးပြင်းခဲ့သော်လည်းသူတို့၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအလွန်သဘောသဘာဝဖြစ်ပါတယ်။
သိုးထိန်းအားလုံးလိုပဲသူတို့ကိုသစ္စာရှိ၊ သူတို့ရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှု ခက်တာကသူတို့ပိုင်ရှင်တွေကိုစိတ်ကျေနပ်အောင်သူတို့မှာသဘာဝအင်အားရှိတယ်။
မူလ Sable ဂျာမန်သိုးထိန်းများသည်သူတို့၏ဉာဏ်ရည်နှင့်အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းအတွက်မွေးမြူထားခြင်းကြောင့်ဤတစ်ခုတည်းသောရည်ရွယ်ချက်မှလမ်းလွဲသွားပြီးယခုအခါရပ်တည်လျက်ရှိသည် အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့နှင့်အိမ်မွေးမိသားစုဝင်တစ် ဦး ဖြစ်ရန် ။
Sable ဂျာမန်သိုးထိန်းသည်ကလေးများနှင့်ကျော်ကြားသည်။ သူတို့လိုချင်ရင်ကြင်နာတတ်၊ နူးညံ့သိမ်မွေ့နိုင်တယ်။
ယေဘုယျအားဖြင့်သူတို့သည် (ကျူးကျော်သူများ မှလွဲ၍) လူတိုင်းအပေါ်ကောင်းမွန်သောစိတ်ထားရှိပြီးမည်သည့်ဘဝပုံစံနှင့်မဆိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်သည်။ သူတို့သည်တောင်တက်ခြင်း၊ ကမ်းခြေများနှင့်ရိုးရှင်းသောခွေးပန်းခြံခရီးစဉ်များကိုပင်နှစ်သက်ကြသည်။
Sable German Shepherd ဆိုသောခွေးကြီးသည်ခွေးကြီးများဟုသတ်မှတ်ပြီး ၇၅ မှ ၉၅ ပေါင်ကြားလေးသည်၊ ထိုမိန်းမသည် ၅၅ မှ ၇၃ ပေါင်အထိအနည်းငယ်ပိုမိုပေါ့ပါးသည်။
အထီးလည်း ၂၄ မှ ၂၆ လက်မ၊ အမြင့်မှာ ၂၄ မှ ၂၆ လက်မဖြစ်သည်။
ကြွက်သားနှင့်အားကစားဆိုင်ရာတည်ဆောက်မှုနှင့်အတူသူတို့၏အသွင်အပြင်သည် Sable ရောင်စုံအင်္ကျီနှင့်ရောနှောထားသည်။
သူတို့၏ခန္ဓာကိုယ်လိုင်းသည် S ၏ပုံသဏ္mirာန်ကိုထင်ဟပ်စေ။ သူတို့၏ခန္ဓာကိုယ်၏ထိပ်ပိုင်းတစ်ဝက်သည်သူတို့၏နောက်ဘက်ထက်ပိုမိုမြင့်မားသဖြင့်သူတို့သည်ရှည်သည်ထက်ရှည်သည်။
Sable German Shepherd တွင်နှာခေါင်းနက်နှင့် jawline ပါသောရှည်လျားသောနှာခေါင်းတစ်ခုရှိသည်။
သူတို့မှာ ဦး ခေါင်းခွံပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့နားတွေရှိတယ်။
သူတို့၏မျက်လုံးများသည်အများအားဖြင့်မှောင်မိုက်နေတတ်သည်။ သို့သော် တစ်ခါတစ်ရံတွင် White ကဂျာမန်သိုးထိန်း အပြာရောင်မျက်စိဖြားယောင်းခဲ့သည်။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသူတို့သည်အလွန်ခိုင်မာသောဖောက်များဖြစ်ပြီးအဘယ်သူ၏ပုံပန်းသဏ္strာန်မပြောင်းလဲသေးသနည်း ဝေးသူတို့ရဲ့ဝံပုလွေဘိုးဘေးတို့မှ ။
ဤခွေးသည်အောက်ပါတို့ပါ ၀ င်သည့်အရောင်အမျိုးမျိုးဖြင့်လာနိုင်သည်။
သူတို့မျက်လုံးတစ်ဝိုက်တွင်အနက်ရောင်မျက်နှာဖုံးရှိသည်၊ Zorro ကဲ့သို့ဖြစ်သည် ( သောကြီးစွာသောဂျာမန်သိုးထိန်းနာမကိုအမှီလုပ်ဖြစ်ပျက် )!
ဒီအနက်ရောင်မျက်နှာဖုံးမှာအမည်းရောင်ပါ ၀ င်ပြီးနောက်ကျောမှာကုန်းနှီးပုံစံလည်းပါရှိပါတယ်။ ဒီအမှတ်အသားများကိုရှာမတွေ့ပါ အနက်ရောင်အရောင်မူကွဲပေါ်မှာ ။
Sable German Shepherd သည်မတူညီသောအင်္ကျီနှစ်မျိုးရှိသည်ဟုအသိအမှတ်ပြုကြသည် နှင့်ကြာရှည် ။
အဆိုပါနေစဉ်အလတ်စားအင်္ကျီကိုဗီဇ, ကြီးစိုးဖြစ်ပါတယ် ရှည်လျားသောအင်္ကျီကိုဗီဇ recessive ဖြစ်ပါတယ် ။
ဂျာမန်သိုးထိန်းတစ် ဦး သည်အလယ်အလတ်အင်္ကျီဖြင့်သာလက်ခံသည့်တစ်ခုတည်းသောအင်္ကျီဖြစ်သည် အဆိုပါဖောက်စံသည် ။ သို့သော်ဤသည်ရှည်လျားသောအင်္ကျီဂျာမန်သိုးထိန်းမွေးမြူကြသည်မဟုတ်, သူတို့ရိုးရိုးယှဉ်ပြိုင်နိုင်ဘူးမဆိုလိုပါ!
ဒီခွေးတစ်ကောင်ရဲ့အင်္ကျီကိုမကြာခဏသွန်းလောင်းပါလိမ့်မယ်။ စင်စစ်အားဖြင့်သူတို့သည်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့်အညီသွန်းလောင်းခဲ့ကြသည်။ သင့်ခွေးကလေးသည်နွေရာသီအတွက်ပြင်ဆင်ချိန်တွင်သူတို့၏ဆောင်းရာသီကုတ်အင်္ကျီကိုသွန်းလောင်းစဉ်သင်ပူနွေးသောလများအတွင်းသင်၏အိမ်တစ်ဝိုက် sable သားမွေးများများစွာကိုမျှော်လင့်နိုင်သည်။
သင့်ရဲ့ခွေးကလေးကိုလေ့ကျင့်ဖို့ကြိုးစားပါ ဖြစ်နိုင်လျှင်အစောပိုင်းအသက်အရွယ်မှာ blow dryer ရန် ။
သင်၏ဂျာမန်သိုးထိန်းကိုရေချိုးခြင်းသည်လိုအပ်မှသာပြုလုပ်သင့်သည်။ ဥပမာ; သူတို့ဆုံးဖြတ်လျှင်, သူတို့သည်ရွှံ့၌လှည့်ပတ် splash, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့သူငယ်ချင်းရဲ့မစင်ထဲမှာလှိမ့်ဖို့ကောင်းတစ် ဦး အယူအဆပါပဲ။
သင့်ရဲ့ခွေးတစ်ကောင်ရဲ့အံသွားတိုက်ခြင်း အညီအမျှအရေးကြီးပါတယ်။ အရိုးများသည်မလိုလားအပ်သောသွားပြားများကိုသွားထုတ်ရန်ကောင်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ဤသည် Sable ခွေးဟာအလွန်အပျော်အပျက်ဖောက်နိုင်ပါတယ်။
၄ င်းသည်တက်ကြွသောလူပုဂ္ဂိုလ်များ၊ စုံတွဲများနှင့်မိသားစုများအတွက်သင့်လျော်သော်လည်း၊ သူတို့၏မြင့်မားသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကြောင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့်မသင့်တော်ပါ။
Sable German Shepherd သည်ပရိုတင်းဓာတ်ကြွယ်ဝသောအရည်အသွေးမြင့်အစားအစာတစ်ခုလိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်အားကစားနှင့်လုပ်ကိုင်သောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့၏အစားအစာသည်သူတို့ကိုစွမ်းအင်လိုအပ်သည်။
ဒီခွေးတစ် ဦး ကလူကြိုက်များ option ကို အသားစိမ်းအခြေခံသည့်အစားအစာဖြစ်သည် ။
သို့သော်အချို့သောကုန်ကြမ်းအခြေပြုအစားအစာများသည်ခွေးအား ၄ င်းတို့၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဗီတာမင်များနှင့်ဓာတ်သတ္တုများဖြင့်မထောက်ပံ့နိုင်သဖြင့်တိရိစ္ဆာန်ဆရာနှင့်ထပ်မံဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်အစားအသောက်တိုင်ပင်ခြင်းတို့သည်အရေးကြီးသည်။
အကယ်၍ သင်စိုစွတ်သောသို့မဟုတ်ခြောက်သွေ့သောအစာစားသောအစားအစာကိုရွေးချယ်ပါကဤအစားအစာများကိုသေချာစေရန်အရေးကြီးသည် AAFCO စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ ။
ခွေးတစ်ကောင်အနေဖြင့်သင်၏ pooch ကိုတစ်နေ့လျှင် ၂ ကြိမ်မှ ၃ ကြိမ်ကျွေးမွေးသင့်သည်။ သို့သော်သူတို့ရင့်ကျက်ပြီးအရွယ်ရောက်လာသည်နှင့်အမျှတစ်နေ့လျှင် ၂ ကြိမ်အစားအစာကောင်းသည်။
အဆိုပါ Sable ဂျာမန်သိုးထိန်းအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အဖော်မိတ်ဖက်စေသည်။
သို့သော်သူတို့ကိုချက်ချင်း Usain Bolt ဖြစ်လာရန်မမျှော်လင့်ပါနှင့်! ခွေးငယ်များအနေနှင့်သင်၏သိုးထိန်းသည်အချိန်ကြာမြင့်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ခင်ဗျားခွေးကလေးကိုသူတို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလို့ယုံကြည်ရင်ရေကူးခိုင်းပါ။ ၎င်းသည်ရေကန်၊ မြစ်၊ ရေကန်တို့တွင်ယုံကြည်စိတ်ချစွာပြေးလွှားနိုင်လိမ့်မည်။
သင့်လျော်သောလူမှုဆက်ဆံရေး၏အရေးပါမှု အလုံအလောက်အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်မရနိုင်ပါ။ အဆိုပါ Sable ဂျာမန်သိုးထိန်းကွဲပြားခြားနားသောပတ်ဝန်းကျင်, လူတွေနှင့်တိရိစ္ဆာန်များနှင့်အတူတသမတ်တည်းနှင့်အစောပိုင်းလူမှုရေးလိုအပ်သည်။
Sable German Shepherd မွေးမြူရေးကိုလေ့ကျင့်ရန်လွယ်ကူသည်မှာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။
ဒါဟာသူတို့ရဲ့အလုပ်လုပ်စွမ်းရည်နှင့်ထောက်လှမ်းရေးအဘို့အလူသိများသူတစ် ဦး ဖောက်ဖြစ်ပါတယ်။
အပြုသဘောအားဖြည့်နည်းလမ်းများလက်ရှိဖြစ်ကြသည် လေ့ကျင့်ရေးခွေးတစ်ကောင်များအတွက်ရွှေစံ ။ ဆုများ (ကစားစရာများသို့မဟုတ်အစားအစာများ) ကိုချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ပေါင်းစပ်အသုံးပြုခြင်းသည်အကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်ရေးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
Sable German Shepherd သည်အသိဉာဏ်ရှိပြီးသိလိုစိတ်ရှိသောခွေးမျိုးဖြစ်သောကြောင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤသည်ဖောက်မှုသည်ဆွဲယူခြင်း၊ စစ်ပွဲဆင်နွှဲခြင်း၊ ပုန်းအောင်းခြင်းစသည့်ဂိမ်းများကိုကောင်းစွာအကျိုးပြုသည်။ သူတို့မှာနှာခေါင်းရှိတယ်။ ဒါ့အပြင်အားကစားနဲ့ကစားစရာတွေကိုပုန်းအောင်းဖို့ကလည်းကောင်းတဲ့အကြံတစ်ခုဖြစ်တယ်။
Sable German Shepherd သည်မျိုးရိုးဗီဇအားဖြင့်ကျန်းမာရေးပြtoနာများနှင့်ဆက်စပ်နေပြီး၎င်းသည်မျိုးပွားမှုစတင်စဉ်ကမျိုးပွားခြင်း၏ရလဒ်ဖြစ်နိုင်သည်။
ဂျာမန်သိုးထိန်းအတွက်ကျန်းမာရေးပြhealthနာတစ်ခု ဖောက်တင်ပါးဆုံရိုး dysplasia ဖြစ်ပါတယ် ။
Hip dysplasia သည်တင်ပါးဆုံရိုး၏ဘောလုံးနှင့် socket ၏အဆစ်ကိုဖျားနာစွာဖြစ်ပေါ်စေသောရောဂါဖြစ်သည်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ တင်ပါးဆုံရိုး dysplasia တစ်ခုအမွေဆက်ခံအခြေအနေဖြစ်ပါတယ် - ဤရောဂါကိုရှောင်ရှားရန်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အရာများစွာရှိသည်။
အဆိုပါ Sable ဂျာမန်သိုးထိန်းဖြစ်ပါတယ် တစ် ဦး ဂန္ခွေးဖောက် နှင့်မူရင်းဖောက်ရန်အလွန်နီးကပ်တည်းခိုခဲ့သည့်အရောင်မူကွဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီမျိုးစိတ်ကယုံကြည်မှု၊ အကာအကွယ်၊ အသိဉာဏ်၊ ပြီးပြည့်စုံသောအဖော် တက်ကြွစွာနှင့်ဤခွေးတစ်ကောင်မှ၎င်းတို့၏အချိန်ပေးလိုသောသူမည်သူမဆိုသည်။
ကလေးများ၊ တက်ကြွစွာအလုပ်လုပ်နေသောအဖော်နှင့်အလွန်သစ္စာစောင့်သိသောလမ်းလျှောက်သူများကိုဂရုစိုက်ခြင်း၊ ဤမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကိုသူတို့လေ့ကျင့်သင်ကြားပြီးစနစ်တကျပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေသမျှကာလပတ်လုံးပြောစရာမလိုပါ။
အနီ siberian husky ရောင်းရန်ရှိသည်
golden retriever lab ရောနှောထားသောသက်တမ်း
pomeranian နှင့်ရောစပ်ထားသောအသေးစား husky
အပြာနှင့် tan ဂျာမန်သိုးထိန်း